दार्चुलाबाट मात्र तीस किलो यार्सागुम्बा निकासी | Rajmarga
दार्चुलाबाट मात्र तीस किलो यार्सागुम्बा निकासी
दार्चुला । यस वर्ष हालसम्ममा दार्चुला जिल्लाबाट ३० किलो यार्सागुम्बा जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयबाट ३० किलो यार्सागुम्बा निकासी पूर्जी दिइएकोमा सोही मात्रामा निकासी भएको सूचना अधिकारी पेम्बा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
Previous post: बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? बिहे अगाडि युवतीलाई सोध्नुहोस् यी ५ प्रश्नहरु !
Next post: सोलुको तिङ्लामा भएको जिप दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते